about computer, few information about computer, computer knowledge, waht is computer, child education in Nepal, educate your children online,, An online link of nepali portals, nepali food recipe, how to prepare momo, how to prepare dal bhat, how prepare nepali food, newari food, list of nepali food recipe, useful links of nepal, map of nepal, airlines list, nepali calendar, slc result, STD ISD codes, insurance companies, EDV Result, nepal banks, univercities, finance, remittance, hotels, travel , trekking and many more
"Educate Your Child Online"
How to Create and save file
Learn Basics information about Computer in Nepali
कम्प्युटर बारे साधारण जानकारी
In this page you will learn about, Learn Computer Basics in Nepali
2.1 कम्प्युटर के हो
2.2 हार्डवयर र सफ्टवयर
2.3 केन्द्रीय प्रशोधन इकाई (केप्रई)
2.4 सिडि/डिविडी ड्राइव
2.5 Random Access Memory ( RAM - राम)
2.6 हार्ड डिस्क
A computer isaprogrammable machine designed to automatically carry outasequence of arithmetic or logical operations. The particular sequence of operations can be changed readily, allowing the computer to solve more than one kind of problem. An important class of computer operations on some computing platforms is the accepting of input from human operators and the output of results formatted for human consumption. The interface between the computer and the human operator is known as the user interface. (wikipedia)
कम्प्युटर के हो
कम्प्युटर एउटा गणितिय र तार्किक भाषामा बुदागत लेखिएका अदेशहरू स्वचालित तरिकाले अबलम्बन गर्ने यन्त्र हो। कम्प्युटर ले आफनै यान्त्रिक भाषा मात्र बुज्दछ । हामिले दिने सबै अदेशहरू कम्प्युटरले पढ्न सकने भाषामा अनुवाद गर्ने कार्यभाषा (program) ले मानब भाषा र कम्प्युटर बीचमा अनुबादकको काम गर्छ । त्यस्तो सम्यन्त्रलाई interpreter भनिन्छ । कम्प्युटर धेरै प्रकारका हुन्छन् यहाँ हामी घरमा प्रयोग गरिने Desktop कम्प्युटर को बारेमा कुरा गर्छौ ।
हार्डवयर र सफ्टवयर
हामीले चलाउने कम्प्युटर विभिन्न पुर्जा , यन्त्र र संयन्त्र मिलेर बनेको हुन्छ . Hardware अथवा नेपालीमा पुर्जा हरु माऊस , स्क्रीन, किबोर्ड , जोडिएका तारहरु, सबै यन्त्र or hardware हुन् ।
जुन देखिदैनन , (संयन्त्र) , ति software हुन्. यहाँ मानब सरिर लाई उदाहरण बनाउदा बुज्न सजिलो हुन्छ . हाम्रो सरिरको सबै अंगलाई हामी hardware भनौ । अनि हाम्रो काम गर्ने, सोच्ने र जवाफ दिने प्रकिया चलाउने संयन्त्रलाई हामी software भनौ . हुनत मानब मस्तिस्क कसरि संचालन हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै लेख छैन. तर अहिलेलाई यो उदाहरण राम्रो हुन्छ बुज्न को लागि ।
एक हरफमा भन्दा " जुन छुन र देख्न सकिन्छ ति "harware"अनि जुन देखिदैन ति software हुन ।
सबै कम्प्युटरमा उस्तै किसिमको हार्डवयर हुदैन । Desktop कम्प्युटरहरुमा भने धेरै समनता पाईन्छ । Desktop भन्नाले हामीले घरमा प्रयोग गर्ने घरेलु कम्प्युटर हो । Laptop चाही सानो कम्प्युटर हो जसमा CPU र Screen एकै ठाउँमा जोडिएको हुन्छ । Laptop लाई नोटबुक पनि भनिन्छ ।
चित्रमा हेर्नुस् ,
केन्द्रीय प्रशोधन इकाई (केप्रई)
System unit यन्त्र साचो कम्प्युटर हो बाकी कम्प्युटरका पुर्जा हुन । पुर्जाहरूलाई अंग्रेजीमा peripheral device भनिन्छ । एक पटक आफ्नो कम्प्युटर मा हेर्नुस एउटा ठुलो बाकसबाट तारहरु आएर तपाइको टिभी जस्तो स्क्रीनमा जोडिएको छ । तपाईंको हातमा भएको मुसा जस्तो पुर्जा पनि तेही बाकस केप्रई (केन्द्रीय प्रशोधन इकाई, CPU ) सँग तारले जोडिएको छ । तेही बाकस भित्र CPU = Central Processing Unit) रहेको हुन्छ । जुन कम्प्युटर को मुख्य दिमाग व मुटु हो। तेही केप्रई (केन्द्रीय प्रशोधन इकाई, CPU ) मा सबै सबै तथ्यहरु प्रसोधन हुन्छन ।
तपाईको कम्प्युटर मा कम्तिमा एउटा CD/DVD हाल्ने ठाउँ, अलि पुरानो कम्प्युटर भए Floppy हाल्ने ठाउँ होला । यिनीहरु तपाईको कम्प्युटर मा गरिएका कार्यहरु/फाइलहरू बचाएर राख्न लाई प्रयोग गरिन्छ, वा रेकर्ड गरेको कुरा कम्प्युटर मा हेरिन्छ सारिन्छ वा प्रसोधन गरिन्छ । यिनीहरु external storage device (बाहिरी भण्डारण यन्त्र) हुन् । कम्प्युटर भित्र पनि फाइल बचाएर (save ) राख्ने Drive (भण्डार) हुन्छ । त्यसलाई hard drive भनिन्छ । वास्तवमा Hard को अर्थ कडा हो, र soft को अर्थ नरम , सब्दिक अर्थमा हेर्दा , harware भन्नाले कम्प्युटरका कडा बस्तु र software भन्नाले नरम अर्थात नदेखिने कम्प्युटर भाषा र सम्यन्त्र भन्ने बुझिन्छ ।
CD/DVD Floppy Drive
Floppy drive र CD/DVD drive लाई removable drive वा झिक्न मील्ने drive भनिने गरिन्छ। यी येस्ता drive हुन् जसलाई निकालेर अन्त कतै राख्न मिल्छ र फेरी फेरी पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । तर तपाई को कम्प्युटर भित्रको hard drive संग यस्ता CD र floppy drive भन्दा धेरै गुना बढी डाटा सामाग्री भन्डार गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ । तर जति ठाउँ भए पनि ईन्टरनेट को यो जमनामा सामाग्री download गरेर छिट्टै हार्ड drive भरिन पनि सक्छ , त्यसैले अती आवस्यक नभए सम्म अरु सामाग्री हार्ड drive बाहिरै भण्डार गरेर राख्नु राम्रो हुन्छ । तेसै गरि कुनै अती जरूरी कुराहरु पनि खाली हार्ड ड्राइव को मात्रै भर नपरेर कतै अरु नै ठाउँ मा backup लिएर राख्नु राम्रो हुन्छ । backup भन्नाले तेस्को प्रतिलिपी बनाउनु हो । प्रतिलिपी ( backup )को बारेमा हामी फेरि चर्चा गर्ने छौ ।
Random Access Memory ( RAM - राम)
तपाई को कम्प्युटरमा एकै पटक धेरै कुराहरू प्रसोधन हुन्छन । तपाईंले हेर्दा सबै प्रसोधन एकै पल्ट भए जस्तो देखिन्छ तर कम्प्युटरले कुनै पनि कुरा एक पटकमा एउटा मात्र गर्न सक्छ । कम्प्युटरले जे कुरा पनि धाराबाहिक तरिकाले गर्छ । अर्थात पहिले दियेको काम पहिले । सबै अदेशको कर्यन्वयन लाइनमा मात्र हुन्छ । कम्प्युटरले लेखिएको कार्यक्रम लाइन लाइन पढ्छ आनि काम गर्छ । तेसैले हेर्दा एकै पटक भए जस्तो देखिये पनि तपाई ले एकै समय मा सबै चिज हरु प्रयोग गर्न सक्नुहुदैन । तपाई ले कम्प्युटर चलाउदा प्रयोग गर्नुहुनी समय मा कम्प्युटर को धेरै नै सानो भागमात्रै प्रयोग गर्नु हुन्छ तपाई को कम सबै random access memory (राम) मा बस्छ आनि लाइनै प्रसिधन हुन्छ । कम्प्युटर ले यति छिटो काम गर्छ की हामीलाई सबै एकै पटक भए जस्तो लाग्छ ।
यदी राम यति नै छिटो छ र यसमा सामाग्री भण्डार पनि गर्न सकिन्छ भने किन सबै कुरा लाई यसै मा save नगरेर अरु कुनै कुरा को प्रयोग गरिन्छ त भन्ने कुरा तपाई को मन मा उब्जिन सक्छ । यसको उत्तर यस्तो छ - राम एउटा क्षणिक भन्डार हो । अर्थात् जब सम्म कम्प्युटर खुल्ला हुन्छ तब सम्म मात्रै यसमा सबै कुरा सुरक्षित रहन्छन तर जब जानाजान वा अन्जानमै कम्प्युटर बन्द हुन्छ तब यसमा कुनै पनि कुराहरु बाकी रहदैनन । यो switch बन्द गरे पछि बत्ति निभेको जस्तै हो ।
तपाई को कम्प्युटर मा भएको सम्पूर्ण फाइल/फोल्डर तपाई को कम्प्युटर को हार्ड डिस्क मा save भएको हुन्छ । तपाई ले हार्ड ड्राईव लाई देख्नु हुदैन किन भने यसलाई खास् किसिमको खोल भित्र राखिएको हुन्छ र येसलाइ येसरी नै राखन जरुरि हुन्छ । Hard Drive राम ( RAM )भन्दा पृथक रहेर सम्पूर्ण कुरा लाई आफु भित्र भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ । यस भित्र एक पल्ट भण्डारण भएको कुरा कहिले पनि मेटिदैन (बत्ति भए वा नभए पनि, कम्प्युटर बन्द भएपनि) । आजभोली बन्ने हार्ड drive धेरै क्षमताको हुन्छ ।
माउस भनेको मुसा जस्तो देखिने कम्प्युटर को CPU मा तारले जोडिएको एउटा पुर्जा हो । माऊसको मदतले कम्प्युटरमा भएका बटन हरु थिच्न सकिन्छ । यसलाई टिभी को रिमोट कन्ट्रोल संग दाज्न सकिन्छ । माऊसमा दाया र बाया २ वटा बटन हुन्छन । एउटालाई प्राथमिक (मुख्य) र अर्कोलाई सहायक बनाउन सकिन्छ । आफु दाहिने वा देब्रे हात चलाउने व्यक्ति हो तेस्को आधारमा माउसलाई मिलाउन सकिन्छ । आजकालको नयाँ माऊसको बिचमा पाग्रा ( wheel ) पनि हुन्छ । त्यो घुमौदा कम्प्युटर मा देखिने पाना तल माथि चलाउन ( स्क्रोल् )सकिन्छ ।
माऊस जस्तै अक्षरपट (keyboard ) पनि कम्प्युटर को केप्रई (CPU ) संग सम्पर्क र संचार गर्ने मध्यम हो । टाईप गर्न key board चाहिन्छ । कि बोर्ड बाट टाईप गरिन्छ । माउस बाट गरिने सबै काम keyboard बाट गर्न सकिन्छ । माऊस keyboard को रिमोट कन्ट्रोल भन्दा पनि हुन्छ ।
Keyboard मा अक्षेरहरु अनि माथि लहरै F1 F2....... F12 लेखिएका हुन्छन । एक पटक आफ्नो केय्बोअर्द को माथिल्लो पङ्तीमा हेर्नुस् त ! F1...F12 हरु function हुन् ।
F1..F12, का केही कामहरू यस्ता छन ।
F2 rename that program
F3 Find Files
F4 address bar
F6 next pane or frame
F7 spelling command
F8 start up menu.(safe mode etc)
F9 update the selected fields
F12 save as command
Keyboard मा अंकहरु र arrow हरु पनि हुन्छन । arrow हरुले screen , cursor र window चलाउने काम गर्छन ।
मनिटर कम्प्युटर को स्क्रीन हो, जहाँ हामी कम्प्युटरको कार्यक्रम हेर्दछौ । पहिले पहिले यी मनिटरहरू मोनोक्रोम (एकै रंगको) हुने गर्थ्यो, अहिले सबै रङिन हुन्छन् । मनिटर को काम प्रदर्सन गर्नु हो।
©Copyright @ eNepal.Asia - 2008-13, Contact: info@enepal.asia